FBI-da oo weerarkii saldhigga Florida fal argagixiso ku tilmaantay | Xaysimo
Home War FBI-da oo weerarkii saldhigga Florida fal argagixiso ku tilmaantay
Dembi baadhe ka tirsan wakaaladda oo la yidhaa Rachel Rojas ayaa sheegtay in FBI baadhayso in ninkaasi keligii falkaa go’aansaday iyo in ay jirto cid kale oo hawshaa kula jirtay.
Waxay sheegtay in arday kale oo Sucuudi ah oo saldhigga tabobar u jooga su’aalo la weydiiyey laakiin aan la xidhin. Waxaanay sheegtay in lagu hayo saldhigga oo ay gacan siinayaan dembi baadheyaasha.
Ciidanka badda Maraykanku wuxu sheegay in askartii saldhiggaa joogtay ay “muujiyeen geesinimo iyo naf hurid ay sharkaa kaga hor tageen”.
Shir jaraa’id oo ay qabatay Axaddii ayaa Rojas aanay wax faahfaahin ah kaga bixin waxa ilaa haatan baadhitaanka lagu ogaaday.
Su’aalaha dhacdadani gelisay xidhiidhka Sucuudiga iyo Maraykanka
Askarta Sucuudiga ah ee Maraykanka tagtaa waxay ciidamada shisheeye ee saldhigyada iyo kulliyadaha milatariga Maraykanka lagu tabobaro ka yihiin 16%. Toogashadan ka dhacday saldhiga Pensacola waxay durba dhalisay su’aalo la iska weydiinayo habka baadhitaanka hubsiimada ee lagu xusho shakhsiyaadka imanaya saldhigyadaas.